Ejersey | May 2022
Main > Ejersey
i-primal jersey sizing
I-Primal jersey sizing - izixazululo ezisebenzayo
Alingana kanjani amajezi amahle? Ukuze usebenzise ngokugcwele izakhiwo zobuchwepheshe besembatho sakho se-Primal, kufanele silingane eduze komzimba ukuze umswakama uhanjiswe ngempumelelo kude nesikhumba ukukusiza uhlale upholile futhi womile. Lo mkhiqizo ukhululekile ukulingana. Idizayinelwe ukuhlala futhi ilingane ngokukhululeka ngokuzizwa okungajwayelekile.
peter sagan ijezi eliluhlaza iwina
UPeter sagan ijezi eliluhlaza iwina - indlela yokubhekana
Ngabe uSagan angalinqoba ijezi eliluhlaza? Kepha ijezi eliluhlaza livame ukunqotshwa ngethalente eliyindilinga lonke nekhono lokuqeda phezulu ngama-bunch sprints ngenkathi kukhishwa imiphumela kumjezisi kuqeda futhi yingakho irekhodi likaPeter Sagan linqobe kasikhombisa. 2021.
ijezi elimhlophe liphenduka
Ijezi elimhlophe ivuelta - uphendula imibuzo
Ayini amajezi eVuelta? Umholi jikelele njengamanje ugqoke ijezi elibomvu, yize phambilini bekuyi 'Maillot amarillo' (ijezi eliphuzi) kanye ne'Jersey de Oro '(ijezi legolide) ozakwabo waseSpain ijezi eliphuzi leTour de France.
Ijezi le-rainbow - ungahlala kanjani
Kusho ukuthini ukuthi ijezi lothingo kusho ukuhamba ngebhayisikili? Ijezi iRainbow yijezi elikhethekile eligqokwa abagibeli bamabhayisikili abaphambili emhlabeni ngesikhathi semijaho. Isibonelo, umpetha womjaho womgwaqo womhlaba ubeligqoka ijezi ngenkathi eqhudelana emijahweni yasesiteji kanye nemijaho yosuku olulodwa, kepha ubengeke ayenze ngezikhathi zesilingo.